Igbo, John: Lesson 106 - Jizọs jidere n'ogige ahụ (Jọn 18:1-11) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 106 (Jesus arrested in the garden)
1. Jizọs jidere n'ogige ahụ (Jọn 18:1-11)
1 Mb͕e Jisus kwusiri okwu ndia, Ya onwe-ya na ndi nēso uzọ-Ya gabigasiri miri-iyi Kidron, ebe ubi ab͕ara ogige di, nke ha onwe-ya na ndi nēso uzọ-Ya bàbà nime ya. Ma Judas, onye rara Ya nye, mara kwa ebe ahu: n'ihi na Jisus na ndi nēso uzọ-Ya zukọrọ n'ebe ahu. 3 Judas, mb͕e ọ chiri ndi-agha na ndi nēje ozi site n'aka ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi, biara n'ebe ahu, ya na oriọna na oriọna na ihe-agha.
Jizọs gwara Nna ya n'ekpere, na-etinye ndụ ya n'aka Chineke, tinyere ndịozi ya na ndị na-eso ụzọ ya. N'ekpere ekpere a, o kwusiri okwu ya, ministri na ekpere. Mgbe ahụ, ọ banyere n'ọhụụ ọhụrụ nke nhụjuanya na ahụhụ iji rụzuo ọrụ ya dị ka Nwa Atụrụ Chineke na-ebu mmehie ụwa.
N'ihi ya, ọ banyere n'ogige dị n'ubi nke dị n'Ugwu Oliv n'akụkụ ọdọ mmiri Kidrọn bụ ebe mmiri na-egbu mmanya. Nke a bụ ebe mgbaba ma gbaghaa na ya na ndị na-eso ụzọ ya malitere, na ebe ọ na-ehi ụra mgbe nile.
Judas maara banyere mkpuchi nzuzo a, ọ gwakwara ndị isi ndị Juu banyere Jizọs n'ebe ahụ. Obi tọrọ ha ụtọ ma chịkọta ndị nche ụlọ nsọ na ndị nnọchianya nke ndị Farisii. Ha enweghị ikike ijide onye ọ bụla n'abalị ma ọ bụ buru ogwe aka, ma e wezụga nkwekọrịta nke ndị ọchịchị Rom. A gwara gọvanọ. Ndị ndú ndị Juu enweghị afọ ojuju banyere ihe ọmụma Judas, kama ọ gwara ya ka o duo ụlọ ọrụ ahụ ijide Kraịst. Ya mere, Judas abughi nani onye nra ma o nyekwara Jizọs n'aka ndị iro ya. Chineke gbochiri ya ka O kwe ka Okpara Ya nyaa onyinyo nke onye nrara ma o bu ihe ozo. Chineke di elu.
4 Ya mere Jisus, ebe Ọ matara ihe nile nābia n'aru Ya, Ọ pua, si ha, Ònye ka unu nāchọ? 5 Ha we za ya, si, Jisus onye Nazaret. Jizos si ha, Mu onwem bu Ya. "Judas, onye raara ya nye, guzokwa n'etiti ha. 6 Ya mere mb͕e Ọ siri ha, Mu onwem bu Ya, ha we laghachi azu, da n'ala.
Anyị amaghị otú ndị agha ahụ si banye n'ogige ahụ. Ma eleghị anya ha nwere ọtụtụ lantern iji chọpụta ya ma ọ bụrụ na ọ chere na ọ ga-agbapụ. Jizọs nọ na-ekpe ekpere nke ukwuu, ndị na-eso ụzọ ya nọkwa na-ehi ụra. N'ekpere ọ hụrụ na ụlọ ọrụ na-abịa na onye na-arara ya nye. O meghi njem iji gbanaa n'agbanyeghi na o maara ihe na-echere ya n'omume ikpe na mmegbu. Ọ maara ihe nile ma na-erubere Nna ya isi. O biliri ma nyefee ụlọ ọrụ na-aga n'ihu; ebube ya na nsọpụrụ ya. N'ikwu eziokwu, ọ bụghị Judas nyefere Jizọs, mana Onyenwe anyị nyere onwe ya maka anyị.
Ọ jụrụ ha, "Ònye ka ị na-achọ?" Mgbe ha kwupụtara aha ya, ọ zara n'ụzọ Chineke, "Abụ m Ya". Onye obula nke nwere uche nke ime ka amara na na Jizos, Chineke guzo n'etiti ndi mmadu gwa ha ihe Chineke gwara Mosis, "ABUM". "Ị n'eziokwu na-achọ igbu Onye Nzọpụta gị? Abụ m Ya, lezie anya ihe ị na-eme. Abụ m Onye Okike na Onye Mgbapụta, na-eguzo n'ihu gị."
N'oge a niile, Judas nọ na-eguzo gburugburu ya, okwu ndị a makwara obi ya. Nke a bụ oge ikpeazụ ọ kpọtụrụ aha na ozioma Jọn. John ekwughị ọnụ ọnụ Judas maọbụ otú o si gbuo onwe ya. Nchegbu Jọn bụ isi bụ Jizọs, bụ onye o gosipụtara ná mkpebi siri ike n'ihu ndị iro ya. Inye onwe ya n'enye onwe ya n'olu nwayo jidere obi Judas n'ihi na Jizos di njikere onwu. Mgbe ahụ, Judas na ụlọ ọrụ ahụ dara mbà n'ihu ọnụnọ. Ha kwadebere maka agha iji jide onye ebubo ahụ. N'ebe a, o ji ebube nke nnukwu onye nchụàjà na-abịakwute ha n'ụbọchị mkpuchi mmehie, sị, "Abụ m Onye ị chọrọ." Ha dabara n'ala, Jisos wee wepu ha, ma o nogide n'iru ha.
7 O we si ha, Ònye ka unu nāchọ? Ha si, Jisus onye Nazaret. 8 Jisus zara, si, Agwaram unu na Mu onwem bu Ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ m, ka ndị a laa, "9 ka okwu ahụ wee mezuo nke o kwuru, sị," N'ime ndị ị nyere m, ọ dịghị efu m."
Kraịst tụgharịrị uche ya n'ebe ndị mmadụ nọ. Ụfọdụ na-apụ ijide ndị na-eso ụzọ ya, ma Jizọs gbalịrị igbochi ha, chee ihu n'ihu ndị iro ya, na-amachi obi ya. Ọ bụ Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ ahụ nke nyere ndụ ya ndụ maka atụrụ ahụ, o nyekwara ndị agha iwu ịhapụ ụmụazụ ya naanị ya. Obube ya juru ha, ha rubekwara isi n'iwu ya. O kwukwara, "Abụ m Ya," dịka a ga - asị, "Abụ m achịcha nke Ndụ, Abụ m Ìhè nke ụwa, Abụ m Ọnụ Ụzọ, Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ, Ụzọ, Eziokwu na Ndụ. Abụ m Onye nzọpụta a họpụtara ahọpụta, n'ụdị mmadụ ka Chineke na-eguzo n'iru gị. " Aha a "Jisos" putara, Chineke na-enyere ma na-azoputa. Ndị Juu jụrụ enyemaka a sitere n'aka Chineke. Ha achọghị ka Nazaret dị umeala n'obi bụrụ Mesaịa ha.
10 Ya mere Saimon Pita nwere mma-agha, dọputa ya, b͕ue orù onye-isi-nchu-àjà, bipu nti aka-nri ya. Aha ohu ahụ bụ Malkọs. 11 Ya mere Jisus siri Pita, Tukwasi mma-agha ahu n'ọbọ-ya. Iko nke Nna m nyere m, agaghi m aṅụ ya?"
Pita aghọtaghi Onye-nwe Ya, mao b gee okwu ya. Ọ na-ehi ụra ma teta, ka na-egwu egwu. Ọ hụrụ ndị agha ahụ wee were iwe, na-amịpụta mma agha ya, nke Jizọs kwere ka ọ buru. O we bulie onye nējere onye-isi-nchu-àjà ozi, tib͕ue orù Onye-nwe-ayi. A na-ebipụ ntị nwa ahụ. Naanị Jọn na-agwa anyị nke a mgbe Pita nwụsịrị.
Jọn mere ka iwu Jizọs nyere onye na - eso ụzọ ya ike ịmịghachi mma agha ahụ n'ime ya, zere ọbara ọzọ ka ọ hapụ, ma gbochie njide nke onye ọ bụla na - eso ụzọ.
Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya iko nke iwe Chineke nke ọ kwetara ka ọ na-ekpe ekpere. Ya mere, anyi na-aguta nke a dika ihe ozo na-acho aka n'olu mgbawa nke na-aru n'ime nkpuru obi Onyenwe anyi tupu e jide ya. Anyị ghọtara na ọ dị njikere ịta iwe ahụ, na-ekpe ikpe niile na onye ya maka anyị. Iko ahụ na-abịa site n'aka Nna ya. Ya mere O si ewere ihe kariri ya nke kachasi nma. Nke a ọ pụghị ịnagide ma ọ bụghị site n'ịhụnanya, n'ihi na Nna na Ọkpara bụ otu n'ime mgbapụta nke ihe a kpọrọ mmadụ. N'ihi na Chineke huru ụwa n'anya otú a na O nyere abuna kpara amuru Ya.
EKPERE: Anyị na-efe gị, Nna, n'ihi na ị hụrụ ịhụnanya n'anya. Ị nyere Ọkpara gị maka anyị. Anyị na-efe gị, Ọkpara, maka ebere na ịdị ukwuu na njikere ịnwụ. I b͕alaga n'ubi ab͕ara ogige ahu, we b͕ochi ndi nēso uzọ-Gi, rara Onwe-gi nye n'aka ndi-iro-Gi. Anyị na-ekele gị maka ịgọnahụ onwe gị, n'ihi obiọma gị na ezi omume gị.
Gịnị ka Jizọs gosipụtara onwe ya n'ebe ndị iro ya nọ n'ọnụ ụzọ ogige ahụ pụtara?
NNOYCHA - 6
Ntak emi nnyịn inyenede ke Jesus ye enye ke nnyịn?
N'ihi gịnị ka ụwa ji kpọọ Kraịst na ndị ọ hụrụ n'anya asị?
Gini ka Chineke nemegide uwa nke kpogidere Kraist n'obe?
Gịnị ka Mmụọ Nsọ na-arụ ọrụ n'ụwa?
Olee otu Mmụọ Nsọ si arụ ọrụ n'ụwa?
Olee ot 'u Chineke Nna si aza ekpere anyi n'aha Jizos?
Gini mere na olee otu Nna si hu anyi n'anya?
Gini bu isi ihe di na akuku mbu nke ekpere Jizos?
Gịnị ka mkpughe nke aha Nna ahụ pụtara site na Jizọs?
Gini ka nchebe anyi n'aha Nna na-egosi?
Olee ot 'u Jizos si gwa Nna ya ka o zere anyi?
Gini ka Jizos choro n'aka Nna ya maka abamuru ayi?
Gini bu nchikota nke ekpere ndi nchu aja nke Jizos kwuru?
Gini bu ihe Jizos kpughere onwe ya nye ndi iro ya n'onu ugbo?